cawaaqib xumada uu la kulmayo qofkii rasuulka caaya (CSW) | welcome Liban Mukhtar Ramadan's Web-Page Contact Emails: Rabadaan2@gmail.com or Rabadaan1@hotmail.com
cawaaqib xumada uu la kulmayo qofkii rasuulka caaya (CSW)
Posted in: bogga diinta.	Leave a comment
CAWAAQIB XUMIDA UU LA KULMAYO QOFKII CAAYA RASUULKA (SCW) SomaliTalk.com Editorial Board | December 31, 2002 Waxaa na soo kedinayay maalmihii ugu danbeeyay dad ku abtirsanaya inay yihiin soomaali oo si dhiiranaan aan dheelitirsanayn ugu kacaya falal-denbiyeed aad ugu weyn miisaanka culus ee diinta islaamka. Dadkaasi, waxay si ula kac leh wax uga sheegayaan diinta muqaddaska ah ee islaamka, iyagoo aad mooddo inay xanbaarsan yihiin ama lagu soo qanciyay fikrado baadiyaysan oo loo hal-abuuray la dagaallanka islaamka iyo muslimiinta-ba. Haddaba, bishan aan ku jirno 26-keedii ayaa waxaa bogga furan ee loogu tala galay fikradaha akhristayaasha shabakadda somalitalk.com lagu arkay qoraal ka yimid nin soomaaliyeed, kaasoo si bareero leh qoraalkiisa ku soo bandhigay af-lagaaddooyin iyo caay aan ehel u ahayn Suubbanaha Rasuulka (scw). Ninkaan oo dhab ahaantii qoraalkiisa sida ku cad si weyn jaahil uga ah shakhsiyadda weyn ee Rasuulka (scw) iyo guud ahaan aqoonta diinta islaamka ayaa ku andacooday inuu Rasuulka (scw) u yahay ummadda mid baadiyeenaya, wuxuuna isagoo soomaalida uga digaya raacista Rasuulka (scw) yiri hadal uu cinwaan uga dhigay qoraalkiisa oo uu yiri “soomaaliyeey waxaan ka xumahay in Moxamad idin baadiyeeyay”, isagoo isla mar ahaantaasna aan qoraalkiisa aan ku xusin sida iyo qaabka uu u baadiyeeyay. Iyagoo mahadsan ayeey aqristayaasha sharafta leh naga codsadeen haddaan nahay bahda somalitalk inaan jawaab celin ka bixinno qoraalkaan sida weyn meel ku dhaca ugu ah diinta islaamka, innagoo isla markaasna dhinaceena caddaynayna cawaaqib xumida ka imaan karta Rasuulka (scw) oo la aflagaaddeeyo ama meel looga dhaco iyo guud ahaan diinta islaamka. Eebbe (sw) ayaa weyneeyay maqaamka Rasuulka (scw) Waxaan shaki ku jirin inuu Eebbe (sw) sarraysiiyay maqaamka iyo fadliga Suubbanaha Rasuulka (scw), isagoo ka faddilay dhammaan makhluuqaadka ku nool koonkan aynu ku noolnahay iyo addoomada suubban (malaa’igta oo kale) ee iyaga ku nool samada. Eebbe (sw) isagoo noo sheegaya siduu u maamuusay Rasuulkiisa Muxammad (scw) wuxuu yiri “waxaa mahad iska leh Allihii qur’aanka ku soo dejiyay adoonkiisa (Muxammad) oo aan qur’aanka ka yeelin mid qaloocan” suuradda al-kahf aayadda 1-aad. Wuxuu misna Eebbe (sw) yiri isagoo weli tilmaamaya sidii uu u maamuusay Rasuulkiisa Muxammad (scw) ayaa wuxuu yiri “waxaa kheyr batay Allaha qur’aanka ku soo dejiyay addoonkiisa (Muxammad) si uu (markaasi) u ahaado mid u digaya dunida” Suuradda Al-furqaan aayadda 1-aad. Dhinaca kale, wuxuu Eebbe (sw) noo tilmaamayaa inuu Rasuulka (scw) yahay mid naga saaraya baadida iyo mugdiyada shirkiyaadka, isagoo noo saaraya iftiinka iyo hanuunka islaamka, wuxuuna yiri Eebbe (sw) “Eebbe (sw) waa kan addoonkiisa ku soo dejiyay aayado cad-cad si uu idiinkaga saaro mugdiyada, idiina saaro iftiinka, Eebba-na (sw) waa kan idiin naxariista” Suuradda Al-xadiid aayadda 9. Wuxuu Eebbe (sw) nagu addoonsaday inaan qaadanno amarrada uu na farayo Rasuulka (sw), isagoo cadaab daranna nooga digay haddaan qaadan weyno wadiiqadiisaas toosan, wuxuuna yiri “wixii uu Rasuulka (scw) idiinla yimaado qaata, wixii uu idinka reebana ka reebtoonaada, Eebbe (sw) ka cabsada, Eebbe (sw) waa mid ay ciqaabtiisu daran tahay” Suuradda Al-xashr aayadda 7. Sidoo kale, wuxuu Eebbe (sw) nagu adkeeyay inaan ka shidaal qaadanno hanuunka Rasuulka (scw) oo aan isaga ku dayano, wuxuuna Eebbe (sw) yiri “waxaa idiinkaga sugan Rasuulka (scw) ku dayasho wanaagsan waana kuwa rajeynaya Eebbe iyo maalinta aakhiro oo in badan Eebbe (sw) xusaya” Suuradda Al-axzaab aayadda 12. Guud ahaan mu’miniinta waxaa la faray inay si weyn u qaddariyaan una ixtiraamaan Rasuulka (scw), wuxuuna isagoo Eebbe (sw) ka hadlaya arrintaan yiri “kuwa xaqa rumeeyayow codkiina ha ka kor yeelina codka Rasuulka (scw), hana ula jahrina hadalka si aan camalkiina u burin idinkoon ogeyn” Suuradda Al-xujuraat aayadda 2aad. Gooddi haysta qofkii dhibaato u geysta Rasuulka Maadaama aan soo oggaanay sidii weynayd ee uu Eebbe (sw) u maamuusay una karaameeyay xabiibkiisa Suubbanaha Rasuulka (scw), ayuu misna ugu jeedinayaa gooddi daran ciddii iyaga ku tala gala dhibaataynta Rasuulka (scw) oo ay ka koow-ga tahay cayda iyo af-lagaaddada Rasuulka (scw). Wuxuu Eebbe (sw) aayad ku jirta suuradda Al-towbah ku soo gabagabeenayaa hadalkan “kuwa dhibaatada u geysanaya Rasuulka (scw) waxay mudan cadaab daran”. Inkastoo ay jiraan gooddiyadaas, haddana wuxuu qur’aanka noo sheegay inay weligood jireen dad iyaga cadoow u ahaa anbiyadii Alle (sw) sida ku cad aayaddan “saasaan ugu yeelnay Nebi kasta cadoow dembiilayaal ah, Eebbe (sw) ayaa ku filan hanuuniye iyo gargaare” aayadda 31 ee suuradda Al-furqaan. Xukunka qofkii caaya Rasuulka (scw) Aflagaaddada iyo cayda Rasuulka (scw) waa jariimooyinka ugu waaweyn ee la galo. Ibnu Taymiyah wuxuu kitaakbiisa Assaarim Al-masluul ku leeyahay juska 3-aad bogga 983 hadalkan macnihiisu yahay “muujinta aflagaaddada iyo cayda Rasuulka (scw) ayaa ah mid si weyn u dhaawacaysa una dhibaataynaysa guud ahaan muslimiinta”. Dhammaan imaamyada iyo fuquhada islaamka waxay qabaan in cayda iyo aflagaaddada ama iyadoo meel looga dhaco sharafta Rasuulka (scw) ay ka rattibmayso kufri cad, waana sida uu qabo imaamu Shaafici iyo dhammaan fuquhada kale. Imaamu Abii Xaniifa Allaha u naxariistee wuxuu ku sheegay qofkii meel uga dhaca Rasuulka (scw) amaba beeniya inuu yahay murtad (diinta ka baxay), sidaas si la mid ah ayeey qabaan asxaabta imaamu shaacifici oo iyagu leh “qof alla qofkii ugula dhaqaaqa Rasuulka (scw) wax uu ku liidayo sida aflagaaddo iyo cayda qayaxan, Nebiga (scw) oo la ihaaneesto waa kufri ama gaalnimo…” Ciqaabta Rabbaaniga ah ee ka dhalanaysa aflagaaddada Rasuulka (scw) Waa hubaal inuu la kulmayo ciqaab rabbaani ah qofkii aflagaaddeeya ama caaya Rasuulka (scw), ciqaabtaasi ha noqoto mid ku timaadda isagoo saaran dunida ama ha ku timaaddo maalinta aakhiro. Imaamka weyn ee Bukhaari ayaa ku soo arooriyay kitaabkiisa saxiixa ah xaddiis uu werinayo Cabdicasiis Binu Suhayb uuna isna ka sii werinayo saxaabiga jaliilka ah ee Anas Binu Maalik isagoo leh hadalkan macnihiisu yahay “waxaa jiray nin kirishtaan ah oo soo islaamay, wuxuu bartay qur’aanka sida suuradda al-baqara iyo aala-cimraan, wuxuuna noqday markii danbe qoraagii Rasuulka (scw). Goor danbe wuxuu ku noqday gaalnimadiisii, wuxuuna dadka ku oran jiray Muxammad waxna ma yaqaano aan ka ahayn wixii aan anniga u qoray. Ilaah (sw) ayaa maalintii danbe ninkii oofsaday. Dadkiisii ayaa aasay. Markii la gaaray maalintii danbe ayaa la arkay ninkii meydka ahaa oo ay dhulkii soo tuftay oo yaala meel dibad ah, markaasay yiraahdeen waxaa qabriga ka soo saaray Muxammad iyo asxaabtiisa. Meydkii ayeey qaadeen, waxay u qodeen god kale oo si fiican loo qoday, sidii ayeey markalena ku aaseen. Hase ahaatee, maalintii kale ayeey arkeen isagoo dibadda yaalla, markaasay xaqiiqsadeen inay dhulka soo tuftay oo ayna rabin inay qaaddo ninkaas, sidii ayeeyna isaga fogeeyeen meydkoodii. Isla xaddiis la macno dhow xaddiiska kore ayuu ku werinayaa Imaam Muslim saxiixiisa, isagoo uu ka werinaya isla saxaabigii aan xusnay ee Anas Binu Maalik isagoo leh hadalkan macnihiisu ahaa “waxaa naga mid ahaa nin najjaar ahaa oo aqristay (bartay) suuradaha al-baqara iyo aala-cimraan. Wuxuu ahaa qoraagii Rasuulka (scw) ee (waxyiga). Isagoo baxsad ah ayuu u cararay xaggii ahlu-kitaabka (nasaarada iyo yahuudda). Markii ay oggaadeen inuu ahaa qoraagii Rasuulka (scw) ee waxyiga ayeey u yimaadeen iyagoo jeclaystay siduu gacantooda ugu soo galay. Ma sii joogin jeer maalintii danbe uu Alle (sw) ka dilo. Waxay dooneen inay aasaan, markaasay u qodeen godkii ay ku aasi lahaayeen, hase ahaatee dhulkii ayaa soo tufay oo ku soo tuuray wejiyadoodii, dabadeedna way isaga tageen kadib markii ay ka quusteen aasitaankiisa, waxayna ku danbeysay cirabtiisa ciqaabtaas foosha xun oo tilmaan cad u ah been-abuurkii uu ku been abuurtay Rasuulka (scw). Haa, sidaas ayeey ku danbeesay abaalmarinta uu ka dhaxlay fal-denbiyeedkiisa. Wuxuu Eebbe (sw) ku fadeexeeyay dadkoo dhan, inuu ka soo saaray qabrigii ay is yiraahdeen ku astura oo ku aasa. Maadaama uu is yiri ku been abuuro oo uu dhibaateeyay Rasuulka (scw) ayuu Eebbe (sw) u aaray addoonkiisa sharafta badan ee Rasuulka (scw). Haddaba, ugu danbeyntii waxaan ugu nasteexeenaynaa dadka la qalday ee aflagaadda qayaxan u geesanaya Rasuulka (scw) iyo diinta islaamka inay ka waantoobaan, ogaadaanna inuu Eebbe (sw) yahay mid xafidaya oo ilaalinaya diintiisa toosan iyo sunnada xabiibkiisa Rasuulka Muxammad (scw). SomaliTalk.com Editorial Board
Africa/Australia/Canada/USA/Yurub Lasoo xiriir: xasan cali xasan2002–12–31 | 2003-01-01
FAAFIN: SOMALITALK.COM Baro Siiradii Rasuulka (scw)…
www.rabadaan.wordpress.com/siiro Baro Saxaabadii